WAXA AAD U BAAHAN TAHAY INAAD OGAATID MARKAAD BEERTO CAGAARSHO YAR OO HOOSTEEDA WAX LAGU DABOOLAYO - STRAWBERRIES
Qodobkani, waxaan tixgelineynaa beeritaanka strawberries sida hoos ku qoran, u tilmaam dhinaca dhinacyada wanaagsan iyo kuwa xun ee qaabkan, kuu sheegaan sida loo sameeyo iyo inta ay ku kacayso. Waxaan baraneynaa sida loo kordhiyo wax soosaarka marka la isticmaalayo alaabta daboolka.
Ma taqaanaa? Strawberry waa magaca caanka ah ee dhirta iyo strawberries cagaaran. Magaca "strawberry" ayaa kacay sababtoo ah miraha guud ee dhirta (laga bilaabo erayga "Slavic" ee "club") - isbeddel, wareegsan).
Sida loo doorto wax, noocyo kala duwan
Waxaa jira 2 ikhtiyaar oo daboolaya alaabada la isticmaali karo:
Doorashada organic ama inorganic waxay kuxirantahay doorashadaada iyo kartidaada. Sidaa darteed, waxaan sii wadi doonaa tixgelin faahfaahsan oo ku saabsan alaabta suurtogalka ah
Qalabka dabiiciga ah ayaa badanaa la isticmaalaa sababtoo ah qiimaha hoose ama helitaanka qalabkaan. Cirbadaha pine, caws iyo dhirta waxaa loo isticmaalaa mulchin organic ah. Qalabkani ma aha oo kaliya wax dabiici ah oo dabiiciga ah oo daboolaya shimbiraha, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin dhowr tayadood oo faa'iido leh.
Cirbadaha Pine. Waxay ka kooban yihiin wax soosaarka deg dega ah, kuwaas oo siinaya strawberries badan oo ka mid ah guryaha faa'iido leh. Markaad isticmaasho mulch this, dhadhanka iyo caraf udgoon ee berry ayaa si muuqata u horumarin doonaa.
Straw. Nafteeda, wax faa'iido ah uma laha beeraha oo aan qaadin, laakiin waxay badineysaa cawska, taas oo kaydisa strawberries ka kallanaayo root.
Balka. Tani waa qiimaha ugu jaban, oo aan laheyn waxyaabo khaas ah oo faa'iido leh.
Waa muhiim! Qalabka dabiiciga ah si deg deg ah ayuu u burburiyaa, si dhakhso ah ayey u rogi kartaa substrate-ka kaas oo la socda bakteeriyada iyo fungi.
Tixgeli qalabka aan habboonayn. Isticmaalkooda waxaa keena in nonorganic uusan leexin, shuban-biyoodku ma bilawdo halkaasna way sahlan tahay in laga saaro beerta ama beerta khudradda.
Xulashada unugyada jirka waa weyn:
Ruberoid Wax aan sun ahayn, oo ku filan oo ku filan oo loo isticmaalo in lagu daboolo sariiraha strawberries. Waa wax "culus", laakiin sidoo kale waa muuqaal badan ee filimka.
Agrofibre. Doorasho casri ah oo qaali ah oo loogu talagalay mulch Tayada wanaagsan: waxay u oggolaataa qoyaanka iyo oksijiinta in ay maraan, ilaaliyaan cawska iyo fuuqbaxa. Waxyaalahaas daboolaya waxay u badan tahay ikhtiyaarka ugu fiican, tan iyo markii ay dhacdooyinka keliya ee soo noqnoqonayaan marka la doorto mulch this waa qiimaha. Agrofibre waxay u adeegtaa qiyaastii 5 sano, kuma dhacdo qoyaan iyo ultraviolet, oo leh awood sare.
Filimka madow Mulchaska ugu caansan ee caan ah. Si aad u hesho dhinaca wanaagsan waxaa loo aaneyn karaa raqiis, fududeyn maaddada iyo maqnaanshaha sunta. Filimku wuxuu ku kaydiyaa qoyaanka ciidda, ma siinayo iftiin caws, kaas oo ka muuqan kara maqnaanshaha. Qalabka soo socda ayaa loo saari karaa guryaha asaasiga ah: uma oggolaanayo qoyaanka iyo oksijiinka, inay yeeshaan xoog liish ah, waxaana lagu bedeli karaa kuleyl xoog leh.
Kumbar, caag, caag. Waa wax aan fiicneyn in loo isticmaalo qalabka wax lagu daboolo strawberries, maaddaama qalabkani aanu ku filneyn in ay u oggolaadaan qoyaanka iyo oksijiinka, inay yihiin kuwo culus oo culus, waxay awood u leeyihiin inay sii daayaan walxaha sunta ah ee ciidda inta lagu jiro kuleylka xoogan.
Ma taqaanaa? Fikrad cusub oo ganacsi ee strawberries sii kordhaya ayaa ku beeraya bacaha. Habkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku hesho 2-3 kg of strawberries ka hal bac. Iyo mid ka mid ah bacda noocan oo kale ah oo la heli karo iyada oo aan wax dhibaato ah xitaa on balakoonka dhalada-glassed.
Ka dib markaad tixgelisid dhammaan xulashooyinkan, waxaad ka soo qaadan kartaa mulch for strawberries, ku saleysan doorbidkaaga iyo kartida dhaqaale.
Sida loo diyaariyo sariirta loogu talagalay beeritaanka strawberries hoosta daboolka
Xulashada alaabada daboolan, sii wad diyaarinta sariiraha. Marxaladda ugu horreysa ee aad adiga waxaad u baahan tahay inaad qodo dhulka oo ka saarto dhammaan caws (xididdada iyo hababka xididada ayaa sidoo kale laga saarayaa), jebiyaan naasaha waaweyn ee dhulka iyo heerka carrada.
Shaqadan ayaa la qabtaa 2 toddobaad kahor intaadan dhajin daboolida alaabta. Tani waxaa loo sameeyaa si loo yareeyo wax yar "qulqulaya" kadib marka la qodo. In qaab mulch, waxaan isticmaali doonaa maro madow (agrofibre), kaas oo aan ka sameysan hoos strawberries.
Ka hor inta aan la geyn agrofibre, waxaad u baahan tahay inaad bacrimiso oo qoyso ciidda. Marka lagu daro humus, qaab ah "quudinta" ciidda, waxaad isticmaali kartaa caws iyo kiimikada. bacriminta ee tirada saxda ah. Sariiraha waxaa la dhisay sare (qiyaastii 20-25 cm), laba-line, sida lagu muujiyay sawirka hoose.
Waxaad ogaan kartaa in laba sariirood ka dib ay jirto god dheer oo qoto dheer. Waxaa loo baahan yahay si loo ilaaliyo mulch.
Waa muhiim! Haddii aad isticmaasho filim madow, markaa waxaad u baahan tahay inaad fidiso tuubada waraabka ee u dhaxeysa sariiraha, maadaama filimku laftiisa biyo u sii deyn doono oo aadan awoodi doonin inaad waraabiso.
Sida loo rakibo waxyaabaha daboolaya shawwada
Qaybtaan, waxaan ku bareyn doonaa sida loola macaamilo beertaada. Qalab dabiiciga ah ee loo yaqaan 'strawberries' oo sii kordhaya ayaa loo isticmaalaa ugu horreyn si looga takhaluso haramaha.
Waa muhiim! Cagaarshowgu wuxuu keeni karaa faa'iido iyo waxyeelo labadaba, maxaa yeelay waxay ka kooban tahay walxaha cadaadiska kordhiya. Taasi waa sababta strawberries leh taxadar leh in ay isticmaalaan dadka qaba cudurrada wadnaha iyo xididada.
Waa in la xusuustaa qaybta si ay u jiifiso muraayad madadaalo ah. Markaad isticmaasho agrofibre madow waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso in ay ka kooban tahay laba qaybood. Hal dhinac dhinac wuu dhaafaa, kan kalena wuxuu ka hortagaa inuu ka soo baxo dhulka. Waxyaabahan waa in lagu dhajiyaa qaab sidan oo ah dhinaca biyaha kulul ee hoosta ku yaal oo aan u oggolaanin dhulka in uu qalalo.
Cabbir sariiraha. Cabbiradu waa in aysan aheyn wax ka badan 10 mitir oo laba jibbaaran. m, maadaama ay la shaqeynayaan aag ballaaran oo aad u adag.
Sidaa daraadeed waa wax aan la afuufin, waxay ubaahan tahay in lagu xiro agagaarka guud. Ujeedadaas, guddiyada caadiga ah, oo leh maaddada dhulka lagu cadaadiyo, waa kuwo aad u fiican. Mararka qaar mulchka waxaa lagu rusheeyaa dhulka, iyada oo aan la isticmaalin wax cadaadis dheeraad ah. Tani waxay yareyneysaa suurtagalnimada koritaanka cawska, kor u qaadida soo jiidashada goobtaada.
Waa muhiim! Agrofibre waxay ka ilaalin doontaa strawberries in ay la xiriirto dhulka xilli roobaadka, taas oo macnaheedu yahay in ay ka hortagi doonto leexashada iyo madow ee miro.
Xeerarka beeritaanka strawberry si loogu daboolo waxyaabaha
Milkiilayaasha khibrad leh waxay raadinayeen siyaabo lagu qurxiyo on strawberries, iyada oo yareyneysa waqtiga si loo daryeelo. Mulching waa dabool carrada lagu ilaaliyo carrada iyo hagaajinta guryaha.
Oo halkan su'aasha soo socota: sida loo daboolo strawberries leh wax daboolaya?
Tixgeli sawirka filimka filimka.
Ku dabool xariiq kasta oo leh filim. Waxaan isticmaalnaa filim caag ah oo madow, maadaama aysan u ogolaaneynin in qorraxdu ay soo dhex maraan. Xilliga jiilaalka, mulch tuunboolin ma daadin doono dhulka iyo ka hortagga cimilada. Tani waxay ku siin doontaa dalag weyn.
Cuts ayaa lagu sameeyaa filimka beeritaanka strawberries naftooda. Masaafada u dhexaysa cirifka waa 15-20 cm.
Ka dib markii la beero, si taxadar leh u sii adkee filinka kuraasta ama hoos u riix hoosta.
Hadda in strawberries la beeray, waxaan sugeyno guga.
Sida loo daryeelo strawberries
Spring ayaa yimid, tanina waxay ka dhigan tahay inaan u dhaqaaqno su'aasha soo socota: sida loo daryeelo strawberries?
Laba jeer xilli kasta ku shub geedaha leh dareeraha dareeraha ee xakamaynta. Marka ugu horeysa ee guga, iyo labaad - ee August. Halkii qashin-qubka, waxaad isticmaali kartaa wax kasta oo kale "dharka ugu sarreeya" ee ku habboon berrito. Haddii aad si sax ah u sameeyeen, ka dibna mulching kor u bilaabi doonaa bilowga Bisaylkiisa ee berry by 8 maalmood marka la barbar dhigo dhulka u furan.
Sidee waa in loo waraabiyaa strawberries hoos filim madow? Inta lagu jiro berry ubax u baahan tahay 10-12 maalmood si aad u waraabiyo strawberries. Tani waxay u baahan tahay qiyaastii 11 litir oo mitir labajibbaaran. m
Waxaa fiican inaad isticmaasho waraabinta waraabka. Waxaad isticmaali kartaa buufisyada khaaska ah, laakiin waad naftaada u samayn kartaa haddii sariiraha aaney badaneyn. Waraabinta waa ugu fiican fiidkii. Haddii ay noqoto meel qabow dibadda, joojiso waraabinta.
Guga, caleemaha qalalan iyo tendrils strawberry waa in laga saaro, sida berry ku dayday xoogeeda on iyaga.
Faa'iidooyinka isticmaalka waxyaabaha daboolaya marka la beerto strawberries
Maxay yihiin faa'iidooyinka ka mid ah beeritaanka strawberry hoos mug leh madow?
Faa'iidooyinka wax lagu daboolayo waxaa ka mid ah:
Cabbitaanka qoyaanka dhulka iyo ka hortagaya cimilada;
Ma jirto baahi loo qabo in dhulka lagu daboolo (hoosta alaabta daboolka ah waxaa jira shuruudo wanaagsan oo loogu talagalay horumarinta dirxiga ee dhulka hoostiisa);
Wuxuu hagaajiyaa hababka dheef-shiid kiimikaadka.
Wuxuu ka takhalusaa cuduro badan oo strawberries ah, taas oo ku dhicin iyada oo la xiriirta caleemaha / miraha iyo carrada.
Waxay ka hortagtaa cirridka iyo madow ee berry;
Waxay siisaa berrinka muuqaal fiican;
Waxay ka ilaalisaa ciidda ka badan kuleylka iyo kor-u-qaadka.
Ka dib markaad akhrido waxyaabahaan, waxaad ka bartay wax ku saabsan maaddooyinka daboolaya ee ku habboon beertaada, sida loo diyaariyo dhulka ka hor intaan kabaan. Waxaan bartay sida loo daboolo strawberries oo leh alaabada daboolka ah ee haramaha, maxay tahay muqaalka guryaha ee mulch iyo sababta loo isticmaali karo strawberries.
Waxaan tixgelinnay xeerarka beeritaanka strawberries hoosta alaabta daboolka ah iyo sida si haboon u daryeesho xaaladdahan. Maaddada daboolida qaabka agrofibre waxaa loo isticmaalaa aduunka oo dhan, maadaama ay ka hortagayso qalajinta iyo cimilada carrada, waxay ka badbaadisaa cawska ka soo baxa cawska, ciribta carrada iyo kordhinta dhalidda.